भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal | नेपाल डायरी डट कम
भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal	15
Posted by nepaldiary in नागरीक, नेपाल डायरी, Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal	≈7टिप्पणीहरु
ट्यागहरुअनलाइन प्रदर्शन, गोर्खाली, नेपाली, सुद्लाई पत्र, Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal	भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्ध को अनलाइन प्रदर्शन को अन्तिम फोटो । हामीलाई नेपालडायरी हेरेर कमेन्ट पठाउने र ब्यानर पठाउने सबै लाई धन्यवाद । by Rajesh KC/Nagarik news
नमस्कार, साहेब म बहादुर कान्छा , तपाईंको/ तपाईंहरुको विश्वाशप्राप्त चौकिदार । घर दाङ कोइलाबास गा बि स वडा न ४ तेतर बस्ती ।
साहेब,हजुर को गाथमा आरामै होला । मलाई भने अली सन्चो छैन । कोइलाबास बाट हिंडेर दाङ,सतबरिया आइपुगेको छु । हिजो दिन भरको थकान छ , राती खुल्ला आकाशको दाङ को सतबरिया- २ वनघुस्रीस्थित कर्री सामुदायिक वनक्षेत्रको चौर मा रात काटियो । चिसो लागेको छ, अली अली रुघा खोकी पनि लागेको छ । सुद साहेब, तपाईं का सिमा रक्षक त सिमा भक्षक पो भएर निस्के । दिन रात हामीलाई काटुला, मारुला झै गर्छन्। हैन, हजुरले तिन्लाई सिमा रक्षकमा राखेको कि सिमा भक्षकमा सर ?
सुद साहेब, हामी गरीब छौ, निर्धा छौ , तपाईं का गोली गठ्ठा धारी सैनिक सँग लड्न सक्दैनौ भनेर तपाईंले हामीलाई हेपेको होलानी हैन ? तपाईंहरु त सार्‍है जाली , मापाको पो हुनुहुदोरहेछ नि । गरीब, निर्धा भने पछी जे गरे पनि हुन्छ, थिचोमिचो गरे पनि हुन्छ, हाम्रा चेली बेटी को इज्जत लुटे पनि हुन्छ, बेपत्ता बनाए पनि हुन्छ भन्ने पो तपाईं को निती रहेछ त । तपाईंहरुको निती नियम संक्रिति नै हेपाहा, मिचाहा हो ? चेलीबेटिको इज्जत गर्न, अरुलाई पनि राम्रो व्यबहार गर्न नजान्ने सस्कार मा पो हुर्कनुभएको रहेछ नि यहाँ हरु ? सुद साहेब, हुनत तपाईंको देसमा लाखौ नेपाली ज्याला, मजुरी गर्छन्, चौकिदार र दरबान छन । म पनि त भर्खर फर्केको तपाईंको देश बाट , तपाईंहरुको बचन कती भोगियो, देखियो तर पनि यती तल गिरेर बोल्नु, व्यबहार गर्नु होला एउटा छिमिकी सँग भन्ने त सोचेको थीन मैले । गरीबलाई लाई त हेप्ने, खेदने,मार्ने गर्नु हुँदैन त साहेब । म जस्तो बुढो चौकिदार ले तपाईं जस्ता लाई सिकाउनु पर्ने यती कुरा पनि । हेर्नुहोस साहेब , हामी गरीब छौ, तर स्वाभिमानी छौ। ‘न भुतो र भबिष्यती’तपाइहरुजस्तो अंग्रेजको गुलाम भएर नबाँचेको र नबाच्ने हुनाले अरुलाई हेप्न, उठिबास गर्न र माइक अगाडि झुट बोल्न हामी लाई आउँदैन । तर आउँदैन भन्दैमा आत्मा र आमा लाई बेचेर तपाईंको गुलामी गर्न पनि आउदैन । तपाईं हरुले पो यस्तो सस्कार अंग्रेजको गुलाम गरेर सुक्नु भो होला । हामी ले सिकेनौ साहेब ।
तपाईंलाई यो मेरो धम्की होइन, साहेब सुझाब हो , चेतावनी सम्म हो । ३ करोड छौ हामी सुद साहेब । परि आउँदा हामीले पनि कोदालो पगालेर खुकुरी बनाउन जानेका छौ । हामी किसान हौ, श्रमिक हौ , चौकिदार हौ, युद्ध मोर्चाका सिपाइ होइनौ तर देश ले मागे नि सुद साहेब ज्वालामुखी ओकल्न, सुनामी ल्याउन तयार छौ । बरु मर्न तयार छौ साहेब तर तपाईं को गुलामी गर्ने कदापी तयार छैनौ । तपाईंको घरमा चौकिदार गर्ने बहादुरलाई छोटो, निर्धो नसम्झिबक्सेला । कोइबेला तपाईंको अत्याचार बाट आजित भएका चौकिदार को हातको लाठो उठ्यो भने नि साहेब, तपाईं मात्र होइन, तपाईंका बाउ, बराजु को टाउको फुटाउन समेत सामर्थ्य राख्छ भन्ने त तपाईंलाई पनि ज्ञातै होला । भक्षक बनेका तपाईंका सिमा रक्षका हरुलाई पनि सुनाइदिनुहोला । बाघ को बच्चा जहिल्यै पनि डम्मरु नै हुन्छ, बछेडो हुन सक्दैन । हामी ३ करोड त्यै बाघका डम्मरु हौ, जस्का पिता पुर्खाले युद्धभुमिमा लड्दा लद्डै बरु ज्यान दिए। तपाईंको देशमा जस्तो अंग्रेजको उपनिबेश लाई टिक्न खान दिएनन । शायद तपाईं हरुले पो अर्काको शासन सहेर, अंग्रेजको जुठो पुरो खाएर बाचेको ले होला, त्यै बिस्तारबादी, छिमेकी हेप्ने सस्कार जान्नु भएको छ । हामीले त न त अरुलाई हेप्न जानेका छौ न त हाम्रो चन्द्र सुर्य लाई कहिल्यै झुक्न दियौ न कहिल्यै दिनेछौ । । यो देश त हाम्रो हो नि, हामी नेपाली को साहेब। तपाईंका बाउ बराजुको बिर्ता त होइन नि । तपाईंकै बिर्तामा गएर मनलाग्दी गर्नुहोस् है साहेब । हाम्रो देशमा होइन । तपाईंलाई फोकल्याण, बर्मा को लडाईं त थाहै होला । हामीले लडेको लडाईं हो त्यो साहेब । गोर्खाली ले नि सुद साहेब , उखानै छ ‘गर्भमै सिक्छ रे खुकुरी चलाउन’ । के तपाईं हरुलाई देखाउनै पर्ने हो ? अर्को कुरा नि सुद साहेब , हामी भुटाङे होइनौ नि , नेपाली हौ नेपाली , । वीर बलभद्र का सन्तान । तपाईंहरुलाई जित्ने अंग्रेज त हारेर भागेका थीए एक ताका । तपाईं हरु चै ‘कुन खेत को मुली’ हो र ? पत्र अली कडा भए जस्तो छ । एउटा साधारण, गरीब , चौकिदार नेपाली ले लेखेको पत्र तपाईंका बफादार गिरिजा, माकुन वा प्रचन्ड ले लेखेजस्तो नरम, भाषा मिलाएर, स्वस्ति गाएजस्तो कसरी होस् त ? मिलाएर पढ्नु होला, बुझ्नु होला । अहिले लाई यती मात्रै । समय।परिस्थिती ले तपाइ र तपाईं हरुको सतबुध्धी आएछ भने ठिकै छ नत्र अर्को पटक , नालापानी ,कालापानि वा कोइलाबास को लडाईंमा भेटौँला
हाल : दाङ, सतबरिया Share this:RedditFacebookTumblrGoogleTwitterEmailPrintLinkedInLike this:Like Loading...
7 thoughts on “भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal”	santosh said:	जुन 14, 2009 मा 3:10 बेलुका	Great!
जवाफ फर्काउनुहोस् narendra raj said:	जुन 14, 2009 मा 3:12 बेलुका	this is one of the very nice articl i have read in blog.
जवाफ फर्काउनुहोस् narendra raj said:	जुन 14, 2009 मा 3:13 बेलुका	यो देश त हाम्रो हो नि, हामी नेपाली को साहेब। तपाईंका बाउ बराजुको बिर्ता त होइन नि । तपाईंकै बिर्तामा गएर मनलाग्दी गर्नुहोस् है साहेब । हाम्रो देशमा होइन । तपाईंलाई फोकल्याण, बर्मा को लडाईं त थाहै होला । हामीले लडेको लडाईं हो त्यो साहेब । गोर्खाली ले नि सुद साहेब , उखानै छ ‘गर्भमै सिक्छ रे खुकुरी चलाउन’ । के तपाईं हरुलाई देखाउनै पर्ने हो ? – i am agree !!
जवाफ फर्काउनुहोस् narendra raj said:	जुन 14, 2009 मा 3:14 बेलुका	हेर्नुहोस साहेब , हामी गरीब छौ, तर स्वाभिमानी छौ। ‘न भुतो र भबिष्यती’तपाइहरुजस्तो अंग्रेजको गुलाम भएर नबाँचेको र नबाच्ने हुनाले अरुलाई हेप्न, उठिबास गर्न र माइक अगाडि झुट बोल्न हामी लाई आउँदैन । तर आउँदैन भन्दैमा आत्मा र आमा लाई बेचेर तपाईंको गुलामी गर्न पनि आउदैन । तपाईं हरुले पो यस्तो सस्कार अंग्रेजको गुलाम गरेर सुक्नु भो होला । हामी ले सिकेनौ साहेब ।
तपाईंलाई यो मेरो धम्की होइन, साहेब सुझाब हो , चेतावनी सम्म हो । la चेतावनी kha sud !
जवाफ फर्काउनुहोस् govinda pariyar said:	जुन 14, 2009 मा 3:16 बेलुका	haami na ta kasiko gulam chaer baachu na bhabisya bachnechau
जवाफ फर्काउनुहोस् Narayan sharma Magragadi5Bardiya said:	जुन 15, 2009 मा 9:08 बिहान	Very impresing image & artical thanks for you
जवाफ फर्काउनुहोस् Narayan sharma Magragadi5Bardiya said:	जुन 15, 2009 मा 9:10 बिहान	Very impresing image & artical thanks for artical&image